Ma i tusi kartaa qaar ka mid ah hacks si kor loogu qaado xogtayda Amazon my item?
Waxaa jira dhawr khibradood oo lagu isticmaalo kor u qaadida macluumaadka iibka alaabta Amazon. Su'aashuna waxay noqonaysaa mid aad uga muhiimsan marka ay timaaddo baahi loo qabo in lagu daro alaabta Amazon cusub sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si loo sii wado xajinta iyo ka baxo tartanka. Waa kuwan qaar ka mid ah nidaamyada aad isku dayi kartid inaad ku guuleysatid guulo degdeg ah si aad uhesho alaab cusub oo halkaa ka jira. Win the Buy Box on Amazon
Ku guuleysiga sanduuqa iibsigu waa malaha ugu muhiimsan ee lagu yaqaano markasta iibka weyn ee Amazon. Ma aha in la yiraahdo waa habka kaliya ee lagu shaqeynayo ganacsiga maraakiibta isku dhafka ah, dabcan, haddii aanad sameeynin ama soo saarin alaabtaada. Mana aha maskax ahaan haddii aad rabto in aad si toos ah u iibsato dukaankaaga, waa inaad ku muujisaa dusha sare ee bogga wax soo saarka. Taasi waa sababta aad u wanaajin karto macluumaadkaaga Amazon ee macluumaadka iibka adigoo xooga saaraya gaar ahaan muhiimka ah cabbirka sanduuqa iibka, sida:
Qiimaha - sida muuqata, tani waa waxa ka dhigaya tartankaaga dhinaca kale iibiya. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo, inkasta oo qiimaha Amazon uu yahay mid lagu qeexay kharashka shixnadda, dalabaadka qaar ayaa laga yaabaa inay u muuqdaan kuwo ka raqiisan kuwa kale - sababtoo ah waxay la imaanayaan qiimaha bawblka iyada oo aan wax kharash ah la xariirin. Hase yeeshee, kormeer sii dhow ee dalabku wuxuu si dhakhso ah u dhigi karaa waxyaabo cad.
Abaabulka Gaadiidka - waa tii labaad ee muhiimka ah ee iibka alaabada Amazon. Waxaa ka mid ah shuruuda shakhsiyaadka, oo leh dhibcooyinka ugu muhiimsan ee ODR (Bixinta Xaddiga Sicirada - celinta, soo noqoshada, ama si aan habbooneyn u iibsashada, oo ay ku jirto wixii jawaab celin ah ee ka imanaya iibsadaha), iyo POP (Qiyaasta Dalbashada Dhowrka - boqolkiiba qiimaha kaliya ee lagu guulaystay dhalashada iyada oo aan wax macaamiisha ah waxqabasho lahayn).
Waa kuwan tallaabooyin khaas ah oo aad u baahan tahay si aad u qaadatid inaad ku guuleysatid iibka sanduuqa Amazon.
1. Ugu horreyntii, hubso inaad u qalantid - waxa ay tahay in alaabtaadu tahay in had iyo jeer ay leedahay ASIN si sax ah u dhiganta liis gaar ah oo aad rabto Sidoo kale, hubi haddii aad si sax ah u sameyso shuruudaha iibsiga hore ee sanduuqa.
2. (2) Marka labaad, waxaad hoos u dhigi kartaa qiimahaada waxoogaa ah - marka la eego inaad xaq u leedahay, qiimeeynta waxay dhab ahaantii noqotaa midka kaliya ee go'aaminta guusha ganacsiga ee mid kasta bixintaada. Si fudud u dhig, wax alla wixii aad u baahan tahay waa inaad ka warqabtaa qiimaha saxda ah ee tartameedka, waxaadna siineysaa hal boqol ka yar - waadna qabaneysaa.
3. Ugu dambeyntii, helitaanka midab gaar ah oo orange oo muujinaysa Hirgalinta Amazon ee ku qoran liiska aad iibiso ee FBA waxay hagaajin kartaa xogtaada Amazon ee wax soo saarka shahaadada qaarkood. Habkaas, waxaa lagugula talinayaa inaad ku soo biirto adigoonaduna heleyso helitaanka liiska Amazon Prime - sababtani waa mid ku filan in lagu dhiiri geliyo iibiyeyaasha in ay ku dhuftaan qashinka oo bilaabaan inay helaan abaalmarin dheeraad ah Source .